Shirka Ol olaha diwaangalinta Waxbarashada Oo Ka Furmay Dhagaxbuur. - Cakaara News
Shirka Ol olaha diwaangalinta Waxbarashada Oo Ka Furmay Dhagaxbuur.
Dhagaxbuur,(cakaaranews),jumce, 16ka September, 2016. waxaa ka furmay madasha shirarka ee M.M dhagaxbuur shirka waxbarashada iyo ol-olaha diwaangalinta waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2009TI.
Shirkan waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta maamulka gobolka jarar oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka jarar mudane Cabdi Cali Mataan, maayirka maamulka magaalada dhagaxbuur, mudane Maxamed Xasan Suufi, kooxda isku dhafka ahayd ee ka socoday heer deegaan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan M.M dhagaxbuur.
Waxana ugu horayntii ka hadlay gudoomiyaha gobolka jarar mudane Cabdi Cali Mataan oo ka warbixiyey ahmiyada ay leedahay waxbarashada iyo sidii loo diwaan galin lahaa dhamaanba caruurta da’doodu gaadhay goobaha waxbarashada.
Waxaa kale oo ka hadlay shirkan masuuliyiin ay ka mid yihiin maayirka maamulka magaalada dhagaxbuur mudane maxamed xasan suufi iyo masuuliyiinta hogaaminaysay kooxda ka socoday heer deegaan ee u socoday abaabulka waxbarashada kuwaasi oo dhamaantood ka warbixiyay ahmiyad ay leedahay waxbarashadu iyo dadaalka ay xukuumada DDSI ugu jirto sidii loo tir-tirilahaa jahliga.
Dhankooda qaybaha kala duwan ee bulshada ku shaqan mm dhagaxbuur ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ay caruurtooda gaadhay dada waxbarashad goobaha waxbarashada.